Fondation Solar Ship
Ny mombamomba ireo fiara
Ny fiara solarship dia karazana “dirigeable” izay manaraka ny teknolojia avo lenta araka ny hiaka farany ankehitriny. Ny endrika aerodynamique nohatsaraina, ireo akora synthétiques sy ny fiataovana electronique farany izay raitra, ireo batteries anisan-izay maivana indrindra, ary ireo takelaka afaka mandray sy manova ny herin’ny masoandro ho angovo entiny manidina, no nahafahana nanamboatra ny fiara solarship. Afaka mahazaka entana izay entin’ny fiarabe mpitatitra (camion) izy nefa koa manana ireo toetra tsy manan-tsahala hananan’y fiara manidina. Ny endrik’ity fiara ity dia ahafahana mampitombo ny hadiriny ka ahafahana mampitombo avy telo heny noho ny habeny ny entana zakany.
Mba hanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa dia mamokatra karazana fiara telo i Solar Ship dia ireto avy izany: Caracal – Chui – Nanuq.
Izy no kely indrindra amin’ny fiara vokarin’ny solarship. Lo anarana io dia nalaina avy tamin’ilay anaram-bibidia masiaka avy ao Afrika izay fantatra amin’ny hafainganam-pandehany. Izy dia natao hitovy amin’ireo fiara tsy mataho-dalana (4×4) izay voatokana hoan’ireo toerana sarotra na tsy misy lalana mihintsy.
Ny Caracal dia fiara izay nokendrena hanatanteraka ny asan’ireo fiara manidina mpisafotany sy ireo izay natokana ho fampiasa andavanandro. Afaka miainga sy mipetraka amin’ny toerana tena fohy izy, ary anisan’ireo fiara izay tsy mandany solika izy. Azo atao tsara koa anefa ny mampitombo ny entana entiny raha ialina izany.
Tonoina hoe “Tchuyi” dia avy amin’ny teny Swahili izay milaza ny leoparda izay fanta-daza noho ny hafainganam-pandehany sy ny heriny ary ny fahafahany mitsoriaka. Ny Chui dia mitovy amin’ireo fiara camionnette na koa ireo fiara fitateran’entana madinika.
Ny chui dia fiara voakilasy ao amin’ny sokajy salasalany izay noforonina manokana ho an’ny filan’ny tsena (ISR) sy cargo. Manana ireo fenitra avo lenta ho an’ny fiaingana sy fipetrahana amina toerana fohy izy ary koa fantatra fa tsy mandany solika firy no tsy mitady foto-drafitr’asa goavana eo amin’ny fiaingana na fipetrahana. Azo antoka tsara izy eny am-panidinana ary voasokajy ho isan’ireo fiara izay sady mandeha milina no afaka mandeha koa amin’ny herin’ny masoandro.
Ny “ours polaire” no biby mpiremby anisan’ny goavana indrindra maneran-tany, araka izany anarany izany izay avy amin’ireo mponina taloha tany Amerika, ny Nanuq dia midika hoe biby mendri-panajana.
Izy dia mitovy amina fiarabe mpitatitra izay manana kodiarana 18, izay mitatitra ny ankamaroan’ireo entana mavesatra izay mifamezivezy maneran-tany.
Ny Nanuq dia novokarina manokana ho mpitatitra ireo entana entana goavana indrindra ato amin’ny Solar Ship. Miavaka izy noho ny fahafahany miainga sy mipetraka,amin’ny toerana fohy, ny tsy fandaniany solika firy ary ny tsy filany foto-drafitr’asa goavana raha hipetrak na hiainga. Azo kilasiana ihany koa ho fiara sady afaka mandeha amin’ny milina izy no afaka mandeha amin’ny herin’ny masoandro.
Ny vesatra zakany 200-1 000 kg 3 000-15 000 kg 20 000-100 000 kg
Halavan'ny toerana ilainy ho an'ny fiaingana (Ny vesatra zakany) 100 m 200 m 600 m
Halavan'ny toerana ilainy ho an'ny fiaingana (vide) 40 m 50 m 200 m
Halavan'ny toerana ilainy ho an'ny fiantsonana 40 m 50 m 200 m
Hafainganam-pandeha mafy indrindra 70 kph 100 kph 120 kph
Ny halavitan'ny toerana farany tratrany 1 000 km 3 000 km Illimité
Ny Sponsor Nay